Sat, Jun 23, 2018 | 19:24:12 NST
Total Views: 60.9 K
काठमाडौं, वैशाख ६ – ‘मलाई पाल्नु पर्‍यो, मेरो कोही छैन । भूकम्पमा परेर बाबुआमा मरे, म एक्लो भएँ, कहिले कहाँ बस्छु, कहिले के खान्छु, मलाई बचाउनु पर्‍यो, पाल्नु पर्‍यो’ काठमाडौंको कोटेश्वर चोकमा एक बालक फुटपाथमा पसल थापेर बसेकी एक महिलासँग झण्डै पाँच महिनाअघि यसरी बिलौना गर्दै थिए ।
ती महिलाको मन पग्लियो । नजिकैको कोटेश्वर चोकको एउटा होटलमा बालकलाई पुर्‍याइन् । उही मलिन अनुहार, जाडोले कामेको शरीर, भूकम्पमा परेर बुवाआमा गुमाएको एक्लो बालक । होटल सञ्चालक रामानन्द दास पनि पग्लिए । बालकले अब होटलमै खान, बस्न पाउने भए । सप्तरीका घर भएका रामानन्द दासले काटेश्वरमा न्यु हलेसी रुफटप होटल व्यवसाय गर्दै आएका छन् । उनले त्यही होटलमा ती अनाथ भनिएका बालक (कुमार गिरी) लाई काम लगाए, खान दिए, राखे । बालक कुमार गिरीका दिनहरु होटलमा यसरी नै बितेका थिए । अचानक उनी एकदिन होटलबाटै हराए ।
कुमार गिरी यसरी हराएको यो पहिलो पटक भने होइन । उनले भनेजस्तो न उनका बुवाआमा भूकम्पमा परेर ज्यान गुमाएका थिए, न त उनी एक्ला थिए । उनी पहिलो पटक हराएदेखि नै नेपाली सेनाका क्याप्टेन समेत रहेका बुवा राजकुमार गिरी छोरा खोज्दै थिए । तर १० किलो मिटरको दूरी भित्र होटलमा भाडा माझिरहेका छोरालाई क्याप्टेन बुबाले भेट्न सकेनन् ।
कसरी हराए पहिलो पटक कुमार ?
कुमार अहिले १३ वर्षका छन् । उनी काठमाडौंको नाम चलेकै एक स्कुलमा पढ्थे । गौशालामा रहेको एक स्कुलको होस्टलमा बसेर पढ्दै आएका कुमार चकचके थिए । उनलाई बारम्बार सम्झाउँदा पनि उनको बानी सुध्रिएन । स्कुलले उनलाई अनुशासन विपरीत काम गरेको भन्दै स्कुलबाट निकालेको जानकारहरु बताउँछन् । स्कुलबाट निकाले पनि उनी बुबाआमाको डरले घर नगएको हुन सक्ने बताइन्छ ।
स्कुलबाट निकालिएपछि उनी आफन्तको घरमा गएका थिए । आफन्तले गाडी चढाएर घर पठाए पनि उनी घर गएनन् । घर नगएर उनी कोटेश्वर गए । ‘कोटेश्वरमा मेरो होटलमा आएर मेरो कोही छैन, खान बस्न दिनु प¥यो भनेपछि माया लागेर मैले होटलमा राखेको हुँ । मैले होटलमा काम पनि लगाए बस्न पनि दिएँ’ होटल सञ्चालक रामानन्द दासले भन्नुभयो ।
छोरा हराएको भन्दै प्रहरीमा उजुरी
पुसको पहिलो हप्ता छोरो हराएको थाहा पाएपछि बुबा छाँगाबाट खसे जस्तै भए । काठमाडौंका गल्ली सबै चाहारे, प्रहरीमा खबर गरे, बालबालिका खोजतलास केन्द्रमा निवदेन दिए, तर छोरो फेला परेन । परिवारमा सन्तानले दिएको खुसी पनि बिस्तारै हराउँदै गयो ।
छोरो हराएको भन्दै क्याप्टेन गिरी र श्रीमतीको सम्बन्धमा समेत दरार आउन थाल्यो । छोराको आशामा कयौँ दिनरात बिते, आँखा रसाए, तर महिनौ बित्दा पनि छोरो नभेटिएपछि क्याप्टेन गिरीले लगभग छोरोको माया मारिसक्नु भएको थियो ।
मोवाइलमा छोराको आवाज सुनिएपछि
पुसको पहिलो सातादेखि क्याप्टेन गिरीको छोरो हराएको थियो । वैशाख ३ गते अपरिचित नम्बरबाट एउटा फोन आयो । क्यापटेन गिरीले फोन उठाउनुभयो ‘बाबा म छोरो कुमार बा्लेको ।’ उहाँलाई एकछिन पत्यार लागेन । तर वास्तविकता त्यही थियो, फोन छोरो कुमारले नै गरेका थिए । चैतको अन्तिम सातामा रामानन्दको होटलबाट हराएका कुमार नै एक जना बटुवासँग मोबाइल मागेर फोन गरेका थिए । क्याप्टेन गिरीले वैशाख ३ गते आफ्नो छोरा ल्याउनुभयो ।
सेनाका क्याप्टेनदेखि ‘कर्साब’ सम्म बालबालिका खोजतलास केन्द्रमा
तर घटना यतिमा मात्र सकिएन । घटनाले नयाँ मोड लियो । मंगलबार मध्यान्ह नेपाली सेनाका अधिकृतहरु हेडक्वाटर र भृकुटीमण्डपमा रहेका बालबालिका खोजतलास तथा समन्वय केन्द्रमा ओहोरदोहोर गरेका थिए । होटल सञ्चालक रामानन्द दासले भनेको र क्याप्टेनका छोराको बयान मिलेन ।
भूकम्पमा परेर आमाबुबा गुमाएको आफ्नो कोही नभएको भन्दै शरण गर्न आएपछि आफूले होटलमा राखेको बताएका थिए । तर बालक कुमारले भने आफूलाई बन्धक बनाएर राखेको, कोठामा थुनेको, कोहीसँग सम्र्पक गर्न नदिएको, बुबालाई फोन गरिदिनु म घर जान्छु भन्दा पनि रामानन्द दासले नमानेको आरोप रामानन्द माथि लगाएपछि घटनाले नयाँ मोड लिएको हो ।
तर बालकले भनेको कुरामा विश्वास गर्ने ठाउँ नभएको बालबालिका तथा खोज तलास केन्द्रका एक अधिकारीले भने । ‘ति बालकलाई बन्धक बनाइएको होइन । बाल श्रम शोषण भने गरिएको हो । त्यही अनुसार रामानन्दलाई कारबाही गरिनु पर्छ । हामी पनि गएर त्यो होटलमा हेर्‍यौ, त्यहाँ वरपरका मानिसलाई सोध्यौं, बालक होटलमा काम गर्थ्यो, बन्धक बनाएको होइन भन्ने पत्ता लाग्यो’ खोजतलास केन्द्रका एक अधिकारीले भने ।
क्यापेटन गिरीले आफ्नो छोरालाई बन्धक बनाएर राखेको भन्दै शरीर बन्धक तथा बेचविखन विरुद्ध कारबाही गर्नुपर्ने बताउनुभएको छ । तर आफूले बन्धक नबनाएको, होटलमा काम लगाएर खान बस्न दिदाँ कारबाही भोग्नु पर्ने ? होटल सञ्चालकले रामानन्दको प्रश्न छ ।